မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် ပတ်သက်. အားလုံး - egeomates
ဤစာမျက်နှာကိုမြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် ပတ်သက်. ဒီ site ထဲမှာပါဝင်သောအကြောင်းအရာများတစ်ကြမ်းတမ်းအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ actualizaciones.Si သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်သောအရာကိုမတှေ့နောက်ဆုံးပေါ်ပါရှိသည်, သင်အမျိုးအစားထဲမှာနောက်ဆုံးထွက်စစျဆေးနိုငျ
application များလေ့လာ CAD / GIS
CivilCAD အတွက် align Create
စုစုပေါင်းဘူတာမှမြို့ပြ CAD ဒေတာတွေနဲ့ပုံ Create
AutoCAD မြေပုံ, မြို့ပြနှင့်မြေယာ Desktop ကို 3D ပိုအကြံပေးချက်များ
မြို့ပြ 3D, AutoCAD နဲ့ Revit မြေပုံပိုဗီဒီယိုများ
polylines ထံမှကောက်ကြောင်း (2 အဆင့်)
polylines ထံမှကောက်ကြောင်း (1 အဆင့်)
40 + LISP လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်
မြို့ပြ 3D တစ်ခု alignment ကို (သင်ခန်းစာ 3) ဖန်တီး
AutoCAD မြို့ပြ 3D နှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းများ
မြို့ပြ 3D, လမ်းဒီဇိုင်းသင်ခန်းစာ 2
မြို့ပြ 3D, လမ်းဒီဇိုင်းသင်ခန်းစာ 1
AutoCAD မြို့ပြ 3D နှင့်အတူပုံကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
AutoCAD မြို့ပြလမ်းညွန်အတူ box ကို Create 3D
ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအတွက် AutoCAD မြို့ပြ 3D ဖြေရှင်းနည်းများ
AutoCAD မြေပုံ 3D 2009 များအတွက် Toolkit
UTM သြဒီနိတ်ကနေ box ကိုလမ်းညွန်နှင့်အကွာအဝေး Create
AutoCAD အတွက်အနား Create နှင့် Google Earth ကိုကပေးပို့
AutoCAD အတွက် Box ကိုတည်ဆောက်သင်တန်းများနှင့်အကွာအဝေး
AutoCAD သုံးပြီးပုံလိုင်းများ Build
AutoCAD နဲ့ Excel နှင့်အတူအနားအဆောက်အ
သွင်းကုန်ပုံနဲ့ 3D မော်ဒယ် Google Earth
လက်တင်အမေရိက, ပထမဦးဆုံးအစှဲအဘို့အ PowerCivil
Microstation နဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်မြေပြင်အနေအထားမော်ဒယ် (DTM / DTM) Make နှင့်တစ်ဦး orthophoto calzarle
Microstation အတွက်လမ်းညွန်နှင့်အကွာအဝေးနှင့်အတူဒေတာ Enter
TIN ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ် Bentley ဆိုက်ကိုဖန်တီး
အခြားပရိုဂရမ် CAD / GIS သုံးပြီးမြေမျက်နှာသွင်ပြင်
ထူးထူးအပြားပြား GIS နှင့်အတူကောက်ကြောင်း
ArcGIS နှင့်အတူကောက်ကြောင်း Generate
လေ့လာဘို့ GIS ဆော့ဖ်ဝဲနှိုင်းယှဉ်
အစား CAD ထက် Topo ထက်ပို Topocad
မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် Google Earth ကိုအကြား
Google Earth တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်မြေပြင်အနေအထားမော်ဒယ်
Google က ContouringGE သင်လုပ်နိုင်သည် !!
ယခုပုံလိုင်းများနှင့်အတူ Google Maps ကို,
Google Maps တွင်ပရိုဖိုင်းအတွက်ဖြတ်တောက်မှု,
Microstation မှ Excel ကိုကနေလမ်းညွန်များနှင့်အကွာအဝေးနှင့်အတူတစ်ဦးအနားဆွဲပါ
XYZtoCAD, AutoCAD နှင့်အတူအလုပ်ကိုသြဒိနိတ်
ဂျီပီအက်စ် Babel, ဒေတာလုပ်ကိုင်ရန်အကောင်းဆုံး
AutoCAD မှ Excel ကိုအစဉ်အမြဲပိုလွယ်
AutoCAD မြို့ပြ 3D, ပြင်ပဒေတာဘေ့စကနေတင်သွင်းအချက်များ
တစ်ဦး Excel ကို table ထဲမှာလမ်းညွန်နှင့်အကွာအဝေးပေါ်အခြေခံပြီးအနားတည်ဆောက်
AutoCAD, အကောင်းဆုံး၏အကျဉ်းချုပ်ဖို့ Excel ကို
အရင်းအမြစ်များ, လက်စွဲ, သင်တန်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များ။
နှိုင်းယှဉ် CAD / GIS အစီအစဉ်များကို boot
AutoCAD မြို့ပြ 3D 2011 နှင့်အတူသင်တန်းစီမံကိန်းများကို
Facebook မှာ: မြေယာတိုင်းတာဘို့ဗီဒီယိုများ
GPS စနစ်အသုံးပြုမှုနှင့်စုစုပေါင်းဘူတာရုံ Leica များအတွက်လက်စွဲ
လက်တင်အမေရိကအပေါ် PowerCivil နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ
AutoCAD မြို့ပြ 3D သင်ယူခြင်း, အဖိုးတန်သယံဇာတများကို
စုစုပေါင်းဘူတာ, GPS, နှင့်အခြားကိရိယာများ
အဆိုပါ GPS စနစ် Promark 3, ပထမစှဲ
စမ်းသပ်ခြင်းစုစုပေါင်းဘူတာ Sokkia SET 630RK
မိုဘိုင်း Mapper 6, postprocessing ဒေတာ GPS
မိုဘိုင်း Mapper 6, ဒေတာများကိုဖမ်းယူ GPS
မိုဘိုင်း Mapper6အပေါ်ကို Google Maps
စုစုပေါင်းဘူတာရုံ data တွေကို Download
နှိုင်းယှဉ်မှုဇယား 60 စုစုပေါင်းစခန်းများ
MobileMapper6vrs ။ Juno SC
MobileMapper 6, ပထမဆုံးတွေ့ကြုံ
အဆိုပါ SET520k စမ်းသပ် Sokkia
ခိုးယူ Survey ကိရိယာမြင့်တက်
Trimble အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် submeter တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူ GeoXH လွှတ်တင်
Geoinformatics မတ်လဟာပွင့်လင်း GIS ဆက်လက်
Advertising ကြော်ငြာ greats Geo
Promiviendo အစပျိုး: DielmoOpenLiDAR
အစွမ်းကုန်ဘို့အများကြီး Geoinformatics,7ထုတ်ဝေ ... GIS
Egeomates ငါ 10 ဖတ်နေအကြံပြု
မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အဘို့အများကြီး Geoinformatics 6
Egeomates: multipurpose Cadastre
ပေါရာဏဆရာ, ဆရာမများ၏စကားပြောသော ...
အမေရိကန်မြေတိုင်းစစ်ဆေး, Edition ကိုဇန်နဝါရီလ 2008
နိုဝင်ဘာလ 2007 egeomates ပျံ
Cartesia Xtrema မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
"မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် ပတ်သက်. အားလုံး"3မှ Replies
Manuel Antonio Ramirez Zayas သူ says:
ဇန်နဝါရီလ 2016 ပု
ငါသူတို့ပူဇော်အားလုံးကြည့်ဖို့ဒါမှပျော်ရွှင်မိပါတယ်, လူအပေါင်းတို့သည်ဤ tools များနှင့်အတူ, ငါသည်ငါ့အားများစွာသောစုံလင်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကစီးပွားရေးအခြေအနေအားဖွငျ့, ရှိသမျှအဆင့်ဆင့်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်မနိုင်
Cesare Dantonio သူ says:
စက်တင်ဘာလ 2013 ပု
.sp3 (အတိအကျ esfemeris) ဖိုင်တွေ Rinex travez BERNESE sofware ပြောင်းရွှေ့နိုင်မလုပ်ပဲသူတစ်ဦးတစ်ဝှမ်း Lei ။ မေးခွန်းကဖြစ်နိုင်ခြေရှိသနည်း နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်သင် software ကို download လုပ်ဘယ်မှာမှ။ ငါသည်ဤ Asu စာမျက်နှာလင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်ထဲသို့ဝင်:
http://www.bernese.unibe.ch/ သို့သော်ငါ installer ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုကြိုတင်သင်တို့ရှိသမျှကျေးဇူးတင်ဒီဖြစ်နိုင်သောသို့မဟုတ် No.- ရှိမရှိရှင်းလင်းကူညီနိုင်ဘူး။
ဖာနန်ဒို သူ says:
ဧပြီလ 2012 ပု
နေ့သည်ကောင်းသော။ တစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်မဘူတာရုံ Sokkia set530r ဘို့အကြံပြု link ကို sokkia သို့မဟုတ် program ကို update လုပ်ပေးနိုင်ပုံကိုငါ့ကိုပြောပြနိုင်
ဤ site ကိုစပမ်လျှော့ချဖို့ Akismet ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒေတာသင့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေအဘို့အလုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်ကိုဘယ်လိုလေ့လာပါ.
ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကိုတွေ့ရသကဲ့သို့အိမ်တစ်လုံးတီထွင်သည်။ လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရှင်းပြသည်။ AutoDesk Revit ကိုလေ့လာပါ။
#BIM - AutoDesk စက်ရုပ်ဖွဲ့စည်းပုံကို သုံး၍ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒီဇိုင်းသင်တန်း
Elevation Model (DEM) ကိုရယူပါ။
Google Earth ကို အသုံးပြု၍ ကမ္ဘာ့အပူချိန်နှင့်မိုးရွာသွန်းမှုအချက်အလက်များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
30 GIS Applications ကို
ArcGIS Pro တွင်ဒဏ္withာရီများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်သိကောင်းစရာများ
Pro ကို ArcGIS Learn - လြယ္ကူ
သင်၏ဘာသာစကားတွင် - အွန်လိုင်း 100%